သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ - Best Christmas Gifts
သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ
နိုဝင်ဘာလ 10, 2016 By StellaMarice LeaveaComment
သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ:သင်ရုံလှပသောစားပွဲထိပ်ပိုင်းခရစ္စမတ်ကိုရှာဖွေလိုနေကြသို့မဟုတ်သင်စစ်မှန်သောသောမတ်စ် Kinkade ပန်ကာများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်တို့သည်ဤကိုချစ်သွားကြသည် သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ.
သောမတ်စ် Kinkade ရဲ့အနုပညာအံ့သြစရာနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှပတ်လည်မှာစုဆောင်း၏စိတ်နှလုံးကိုဖြစ်ပွားခဲ့ရာဖြစ်ပါတယ်.
သင်အလျင်လိုနေပါသလား? ထိုအခါလူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးတင့်တယ်ထဲက Check ဖို့သေချာပါစေ သောမတ်စ် Kinkade ဇယားထိပ်ဆုံးခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများမှာ!
သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ:ငါချစ်သော "Light က၏ပန်းချီဆရာ" အဖြစ်လူသိများသောမတ်စ် Kinkade တစ်ချိန်ကသူအမှန်တကယ်-Norman Rockwell နှင့်ဝေါ့ဒစ္စနေးနှင့်အတူဘုံ၌အရာတစျခုရှိခဲ့နှင့်ကပြောသည်ခဲ့: သူကအမှန်တကယ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့နှင့်လူတိုင်းပျော်ရွှင်စေချင်တယ်.
သောမတ်စ် Kinkade အချိန်အတွက်ဿုံတစ်ခုတည်းအချိန်လေးကိုဖမ်းယူနိုင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်စစ်မှန်သောဆုလက်ဆောင်ခဲ့.
သင်သည်အဘယ်သို့ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှာတွေ့သွားကြသည်ထူးခြားသောသောမတ်စ် Kinkade ခရစ္စမတ်သစ်ပင်တစ်ဦးဖှယျရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်.
သောမတ်စ် Kinkade အားဖြင့်ဤရွေ့ကားစားပွဲထိပ်ပိုင်းခရစ်စမတ်သစ်ပင်များတစ်ဦးကသင်၏လုံးဝမှော်ခရစ်စမတ်အပြင်အဆင်အတွက်စုံလင်များအပြင်နောက်ထပ်.
1 သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များအွန်လိုင်း Buy
2 ရထားနှင့်အတူသောမတ်စ် Kinkade Animated Wonderland Express ကို tabletop ခရစ်စမတ်သစ်ပင်
3 illuminated သောမတ်စ် Kinkade သူငယ်တော်ဖွားမြင် tabletop သစ်ပင်
4 ခရစ္စမတ် tabletop သစ်ပင်၏သောမတ်စ် Kinkade ရောင်ပြန်ဟပ်
5 သောမတ်စ် Kinkade ကျေးရွာခရစ္စမတ်ဇယားထိပ်ဆုံးခရစ်စမတ်သစ်ပင်
6 Snowglobe နဲ့အတူသောမတ်စ် Kinkade "အံ့ခြီးဆောင်းရာသီ" ဂီတ tabletop ခရစ်စမတ်သစ်ပင်
7 နောက်ထပ် သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ
သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များအွန်လိုင်း Buy
သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များကိုရှာဖွေနေတဲ့အခါမှာ, သူတို့ကိုမဝယ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအွန်လိုင်းဖြစ်ပါသည်.
အွန်လိုင်းစျေးဝယ်တဲ့အခါမှာသင်ရွေးချယ်ရေးတကယ်ကောင်းသောကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်နှငျ့သငျစည်ကားစတိုးဆိုင်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, အသွားအလာသို့မဟုတ်ယာဉ်ရပ်နား.
ရဲ့ဝယ်ဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်သမျှသောသောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များကြည့်ယူပါစေဟုပြောသည်ခံကြောင်း.
သောမတ်စ် Kinkade animated ရထားနှင့်အတူ Wonderland Express ကို tabletop ခရစ်စမတ်သစ်ပင်
ဒီသောမတ်စ် Kinkade ဂီတ, မီးရထားနှင့်အတူကာတွန်းကိုစားပွဲထိပ်ပိုင်းခရစ္စမတ်သစ်ပင်တစ်ဦးသီးသန့်စုဆောင်းဖြစ်ပါသည်.
အလင်း၏ပန်းချီဆရာများ၏လက်ရာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခဲ့ကွောငျးတစ်ဦးကစားပွဲထိပ်ကိုခရစ္စမတ်သစ်ပင်, သောမတ်စ် Kinkade.
ရထားအပင်ကိုတက်အစဉ်အဆက်ပိုမိုမြင့်မား "ကျော်ဝင်သော" အဖြစ် Watch.
ရထားနှင့်အတူအဆိုပါ Wonderland Express ကိုလှုပ်ရှားနေသော tabletop ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ရှုပ်ထွေးစွာလက်ဖြင့်လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပန်းချီကားဖြစ်ပါတယ်.
ဒါဟာခရစ်စမတ်ဝိညာဉ်တော်သည်တစ်ဦးထိတွေ့ထည့်သွင်းဖို့ glittery ဆီးနှင်းတစ်စောင်နှင့်အတူချွတ်လက်စသတ်သည်!
ပတ်ပတ်လည်နဲ့သစ်ပင်ကိုပတ်လည်ကာတွန်း Wonderland Express ကိုရထားရှိသမျှကိုထိပ်မှလမ်းနှင့်စန်တာကျော်ဝင်သောနှင့်သူ၏ reindeer ပါပျံသန်းသကဲ့သို့သင်တို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
မိမိအ reindeer ပါ "ပျံသန်း" ပတ်ပတ်လည်နဲ့ပတ်ပတ်လည်နှင့်အတူစန်တာ!
သငျသညျလညျးဤစားပွဲပေါ်မှာထိပ်တန်းခရစ္စမတ်သစ်ပင်တစ် medley ကစားဆိုတဲ့အချက်ကိုမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ် ရှစ်ကောင်းစွာရထားရွေ့လျားအဖြစ်ခရစ်စမတ် Carol လူသိများ.
တကျိပ်နှစ်ပါးချက် illuminated အဆောက်အဦးများနှင့် handcrafted တစ်ဒါဇင်နှစ်ဦးကျော်ကိန်းဂဏန်းများရှိပါတယ်.
၏မျက်နှာစာတွင် လှပသောအခြေစိုက်စခန်းသင်စကားလုံးရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် "သောမတ်စ် Kinkade Wonderland Express ကို"
ဤ သောမတ်စ် Kinkade Wonderland Express ကိုစားပွဲထိပ်ပိုင်းခရစ္စမတ်သစ်ပင် is powered byaAC adapter which is included.
သို့မဟုတ်သင်ကိုသုံးနိုင်သည်3မပါဝင်ပါသော AAA ဘက်ထရီ.
အဆိုပါခြုံငုံအမြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် 16 မြင့်မားသောလက်မ.
illuminated သောမတ်စ် Kinkade သူငယ်တော်ဖွားမြင် tabletop သစ်ပင်
ဒီသောမတ်စ် Kinkade ၏အနုပညာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စားပွဲပေါ်မှာထိပ်တန်းခရစ္စမတ်သစ်ပင်သည်နှင့်လက်ရာမြောက်သောအသေးစိတ်နှင့်အတူအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဖြစ်ပါသည်.
ဒီသူငယ်တော်ဖွားမြင်မြင်ကွင်းတစ်ခုစားပွဲပေါ်မှာထိပ်တန်းခရစ္စမတ်သစ်ပင်အလှဆင်ဒဏ်ငွေအနုပညာရှင်ရဲ့ဗဓေလသစ်တစ်ဦး handcrafted ဖြစ်ပါသည်.
သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ features တွေ:
၏ဆိုက်ရောက်3ဓမ္မရာဇဝင်.
40 handcrafted ဇာတ်ကောင် အ handprinted မြင်ကွင်းတစ်ခုဆန့်ကျင်အလတ်စား.
ရပ်တည်ချက် 16 မြင့်မားသောလက်မ
ဒါဟာအစ "အသံတိတ်ည" ကစားများနှင့်ဂီတ၏အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်.
ဒီစားပွဲထိပ်ပိုင်း ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကို LED သေးသေးလေးအလင်းအိမ်နှင့်အတူတက်ထွန်း အကြောင်း ကုမ္ပဏီကြာရှည်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် 10,000 နာရီ ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတာသူတို့အစားထိုးမရနိုငျ. (အကုမ္ပဏီအလငျးအိမျပျေါမှာရှိကြောင်းအကြံပြု, နာရီအနည်းငယ်တစ်ရက်ထက်ပိုမရှိ)
ဒီအပင်ကိုကြွလာ ထိုသို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Authenticity လက်မှတ်နှင့်ရေတွက်ဝင်လက်.
ပါဝင်သည်သို့မဟုတ်ပေါ်မှာ run နိုင်သည့်တစ်ဦး AC adapter နှင့်အတူကြွလာ2မပါဝင်ထားတဲ့ "AA ကို".
ဒါဟာကိုယ့်ကိုပုံဖော်စောင့်ရှောက်ဖို့အပင်၏အသီးထိပ်ပေါ်မှာ fit မှတစ်ဖန်အမိုးခုံးဝယ်ယူရန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်နှင့်သန့်ရှင်းမယ်လို့.
အလုံးစုံ "ဒီမွေးကင်းစဘုရင်ဘုနျးတျောကို" အလှဆုံးသောမတ်စ် Kinkade tabletop ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည် နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်အံ့သြဖွယ်သောဆုကြေးဇူးကိုလုပ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအနီးကပ်မယ်လို့.
ခရစ္စမတ် tabletop သစ်ပင်၏သောမတ်စ် Kinkade ရောင်ပြန်ဟပ်
ဤသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည်လင် tabletop သစ်ပင်ကိုတကယ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ကျောက်သလင်းနှင့်ခြယ်ရှုပ်ထွေးစွာလက်မှ handcrafted ကြောင့်.
ထိုကျောက်သလင်းအပင်ကို၌ရှိကြ၏ အ tabletop သစ်ပင်တပင်ကိုတက်လင်းကရေရှည်တည်တံ့သည့် LED မီးလုံး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပြောင်းလဲနေတဲ့အဆင်းအရောင်နှင့်.
ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်, ထိုကျောက်သလင်းအပင်ကိုပတ်ပတ်လည်နှင့်အဟောင်း-ခေတ်သေးသေးလေးမီးရထားစက်ဝိုင်း တစ် medley မှ 8 အကြိုက်ဆုံးခရစ္စမတ် Carol.
ဒီသောမတ်စ် Kinkade စားပွဲပေါ်မှာထိပ်တန်းခရစ္စမတ်သစ်ပင် အစီအမံ 10 လက်မနှင့်ရှေ့တွင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြားရှိကြောင်းသစ်သားအခြေစိုက်စခန်းပေါ်မှာထိုင်.
Not to forget it also plays ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးခရစ္စမတ် Carol ၏ရှစ်.
အဆိုပါ ခရစ္စမတ် tabletop သစ်ပင်၏သောမတ်စ် Kinkade ရောင်ပြန်ဟပ် တစ်ဦးကိုခစျြတစျခုအတှကျသို့မဟုတ်ကိုယ်အဘို့အံ့သြဖွယ်သောဆုကြေးဇူးစေ!
သောမတ်စ် Kinkade ကျေးရွာခရစ္စမတ်ဇယားထိပ်ဆုံးခရစ်စမတ်သစ်ပင်
ဒီနှင်း tabletop ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကို 15 လက်မမြင့်မားသည်ဖုံးလွှမ်း တကျိပ်နှစ်ပါးသောဗစ်တိုးရီးယားအဆောက်အဦးများ နှင့် လေးဆယ်ကျော်ရွာသား, ရှုပ်ထွေးစွာဆီးနှင်းဖုံးနေအခက်အလက်ဆင်းအရောင်အကြားလက်ခြယ်သခြင်းနှင့်အလတ်စား.
ဒီသောမတ်စ် Kinkade ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကို features တွေ:
AC adapter အားဖြင့်တစ်ဦး Powered နှင့်အတူကြွလာသို့မဟုတ်3AA ကိုဘက်ထရီ (မပါဝင်)
ဗစ်တိုးရီးယားအဆောက်အဦးများနှင့်ကျော် 40 ရွာသားများ,
ဤ ဆီးနှင်းသောမတ်စ် Kinkade tabletop ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ဖုံးလွှမ်း အများဆုံးဆက်ဆက်သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်အပြင်အဆင်မှမှော်တစ်နည်းနည်းထည့်ပါလိမ့်မည်!
Snowglobe နဲ့အတူသောမတ်စ် Kinkade "အံ့ခြီးဆောင်းရာသီ" ဂီတ tabletop ခရစ်စမတ်သစ်ပင်
ရှစ်လက်မမြင့်မားသောမတ်စ် Kinkade ခရစ္စမတ်ဆီးနှင်းကမ္ဘာလုံးသစ်ပင်ကိုအစီအမံများနှင့် ရှစ်လှပတဲ့ခရစ်စမတ် Carol ကစား.
အသီးအသီးနည်းနည်းအဆောက်အဦးထဲမှာတောက်နေတဲ့ switch ကိုနှင့်အလင်းအိမ် Flip and snow swirls through the air.
Snowglobe နဲ့အတူသောမတ်စ် Kinkade "အံ့ခြီးဆောင်းရာသီ" ခရစ္စမတ်သစ်ပင် မည်သည့်ခရစ္စမတ်ပုံစံမျိုးများအတွက်စံပြကြောင်းတစ်ဗဒေဂီတအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်.
ခရစ္စမတ် Artificial tabletop ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ခင်မှာသောမတ်စ် Kinkade ည
This Thomas Kinkade Night Before Christmas Artificial Tabletop Christmas Tree ကကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုထှနျးလငျးပေးပါအဖြစ်ခရစ်စမတ်ရှေ့တော်၌ထိုညဉ့်ပုံပြင် "ကိုပြောပြ", မြင်ကွင်းကမြင်ကွင်းတစ်ခု.
သင့်အနေဖြင့်မီးဖိုများကစန်တာမြင်ရပါလိမ့်မယ်, ခြေအိတ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူချိတ်ဆွဲထားရာ, လည်းပဲ 10 ကဗျာကနေအကျွမ်းတဝင်ချစ်သူတို့မြင်ကွင်းများ, အားလုံး သောမတ်စ် Kinkade ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံကပြောသည်!
ကျော်၏အားလပ်ရက်အလင်းရောင်ဖမ်းယူဖို့ switch ကိုလှန် 20 LED မီးလုံး
"ရှစ်သေးသေးလေး reindeer ပါ" ဟုအဆိုပါရဲကြယ် topper ပတ်ပတ်လည်ကိုချွတ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ပေါ်လာ
သို့တိုင်အခြား အံ့သြဖွယ်ဇယားထိပ်ဆုံးခရစ္စမတ်သစ်ပင် သင့်ရဲ့ခရစ်စမတ်အပြင်အဆင်များအတွက်.
ပိုများသောသောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ
သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်သောမတ်စ် Kinkade ဇယားထိပ်ဆုံးခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကိုရှာကြသည်နှင့်သင်ပြီးသားကဖြတ်ပြီးလာကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်အောက်ကသူတွေကိုကြည့်ပြီ.
အဆိုပါဘရက်ဖို့ဒချိန်းသဖြင့်သောမတ်စ် Kinkade အားဖြင့်ပေးအပ်သည်ထိုအအဓိကအဆိုပါသူငယ်တော်ဖွားမြင် Tree tabletop အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်း (မီးဖိုခန်း)
list ကိုစျေးနှုန်း: စျေးစာရင်းပေါက်မ
ကနေနယူး:0ပစ္စည်းပြတ်
Crystal အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူသောမတ်စ် Kinkade ဂီတခရစ္စမတ် tabletop သစ်ပင်: အဆိုပါဘရက်ဖို့ဒချိန်းသဖြင့် Up ကိုထွန်း (မီးဖိုခန်း)
list ကိုစျေးနှုန်း: $129.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ကနေနယူး: $129.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ
ရာသီသောမတ်စ် Kinkade မင်္ဂလာသက်အဆိုပါဘရက်ဖို့ဒချိန်းသဖြင့် Crystal အိန်ဂျယ် tabletop Tree Play အသံတိတ်ည (မီးဖိုခန်း)
ကနေနယူး: $139.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ
အဆိုပါဘရက်ဖို့ဒချိန်းသဖြင့်ခရစ္စမတ် tabletop အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းခင်မှာသောမတ်စ် Kinkade အဆိုပါည (မီးဖိုခန်း)
သို့တိုင် Undecided? လူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးအပိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အထဲက Check ရန်သေချာစေပါ သောမတ်စ် Kinkade ဇယားထိပ်ဆုံးခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများမှာ!
အမာခံများ Star Wars ခရစ္စမတ်တန်ဆာ
Filed Under: ခရစ္စမတ်သစ်ပင်များ, ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း Tagged With: hawthorne village wonderland express christmas tree, kinkade christmas tree, kinkade christmas village, pop up christmas tree, pull up christmas tree, thomas kinkade christmas, thomas kinkade christmas 2016, thomas kinkade christmas decorations, thomas kinkade christmas houses, thomas kinkade christmas ornaments, thomas kinkade christmas paintings, thomas kinkade christmas tree cottage, thomas kinkade christmas tree topper, thomas kinkade christmas tree train, သောမတ်စ် Kinkade ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ, thomas kinkade christmas village, thomas kinkade christmas village collection, thomas kinkade christmas village set, thomas kinkade collectibles, thomas kinkade figurines, thomas kinkade ornaments, thomas kinkade plates, thomas kinkade pop up6foot christmas tree, thomas kinkade prints, thomas kinkade revolving christmas tree topper, thomas kinkade snow globes, thomas kinkade snowman, thomas kinkade tabletop christmas tree, thomas kinkade tapestry, thomas kinkade tree, thomas kinkade tree topper, thomas kinkade victorian christmas, thomas kinkade village, thomas kinkade village christmas christmas thomas kinkade, thomas kinkade village christmas collection, thomas kinkade winter scenes